Okuthile mayelana nesizukulwane 'nini' | Izincwadi Zamanje
Okuthile mayelana nesizukulwane 'nini'
Isizukulwane se-nini, lelo gama elilahliwe abantu "abavuthiwe" abasilahle ngalo, okusho ukuthi "ukufunda noma ukusebenza", linenoveli yalo.
Kubizwa 'I-Operative Nini', futhi ivela UJaime Alfonso Martínez Sandoval. Inoveli emenyezelwe ngalo Lwesibili njengomnqobi wohlelo lwesithathu lomncintiswano oluhlelwe yi-Editorial Normal kanye ne Umbukiso Kazwelonke Wezincwadi waseLeón, sengithole amaphepha ayi-16 esewonke.
Ijaji elenziwa ngababhali abathile linquma ukuthi:
“Umsebenzi ukhuluma ngendlela eqondile, ehlakaniphile futhi ejabulisayo, inkinga yezenhlalakahle esebenza entsheni yanamuhla. Uphakamisa amahlaya anekhono, acwebezelayo njengesixazululo sesimo esingenathemba. Abalingiswa, abathandekayo nabathembekile ngokugcwele, bazosiza abafundi abasebasha ukuthi baziqonde ngabo ”.
Le ndaba igxile ezenzakalweni zabathathu abasha abathi eminyakeni emihlanu ngemuva kokuqeda isikole samabanga aphakeme bazinikele ekuqongeleleni amabhayisikobho kaChuck Norris, kepha ukuthola ikusasa lokuhlangana okukhulu nalabo ababefunda nabo esikoleni kubenza basebenze.
Umbhali usevele unolwazi oluthile ngalezi zincwadi.Uke wazuza umklomelo weSikeam Boat ka-2006 “Wezipoki, ama-specter nezinye izindwangu ezingcolile”; i-Wide Angle yango-2002 ye "Mutant Republic"; iCastle of Reading 2001 ye "Confidences of a superhero" kanye neFILIJ Indaba Yezingane 1998 ye "Ukububula ngaphansi kombhede."
Yize umbhali uqobo lwakhe ezithethelela ngokuthi ubeyinhlobo eyi-nini, nokuthi futhi kunabazali be-nini noma ohulumeni be-nini, leli gama belilokhu libonakala lingahloniphi kimi nokuthile okungekho ngokoqobo ngokuphelele. Uma sithembela ekutheni izwe thina bantu abasha esilizuze njengefa, futhi ikakhulukazi izwe lethu, lapho kungekho khona amathuba emisebenzi noma amathuba esikhathi esizayo, selike labhujiswa phambilini ngabantu abadala, kusobala ukuthi alinakhanda noma umsila walezi zinhlobo yemigomo. Imayelana nokulayisha onsundu uye kolunye, njengokujwayelekile. Lokungavumi umthwalo wokwehluleka unomphela naphakade. Iqiniso ukuthi asihlali sithola lokho okusifanele.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Okuthile mayelana nesizukulwane 'nini'
Umlingiswa: Kojirô Hyûga (Mark Lenders)